डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न चिकित्सा शिक्षा विधयेक पास गर्नु पर्ने
प्रकाशित मिति: 2017/10/11
काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छ । तर, संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधयेक पास गर्ने÷नगर्ने विषय भने सरकारको नभएर एमाले र माओवादी केन्द्रको कोर्टमा रहेको सरकारी पक्षको तर्क छ ।
डा. केसी सात दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनले आफ्नो सुझाव र माथेमा कार्यदलको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने उनको मुख्य माग छ । यही विषयमा सहमति हुन नसक्दा केसीले अनसन तोडे पनि विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।
शिक्षा मन्त्रालय डा. केसीको मागअनुसार विधेयक अघि बढाउन सहमत भएको छ । बुधबार विहान डा. केसीलाई भेटेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापाले भने, ‘डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । यसो भएमा अनसन तोडिने मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षाको समस्या सदाका लागि अन्य हुन्छ ।’